I-Sonication of Amabhodlela kanye namathini Wokutholwa Kokuvuza - Hielscher Ultrasound Technology
I-Hielscher ultrasound isetshenziselwa ukufaka amabhodlela kanye nemishini yokugcwalisa ukuhlolwa kwe-container ukuvuza ukuvuza kwamabhodlela namathini. Ukukhishwa kwesikhashana kwe-carbon dioxide kuyimpikiswano eqondile yokuhlolwa kwe-ultrasonic ukuvuza kweziqukathi ezigcwele iziphuzo eziphathekayo.
Iziphuzo ze-carbon, ezifana ne-soda kanye ne-bhiya zinomshini ophezulu wokushiswa kwe-carbon dioxide. I-ultrasound izokwandisa ijubane i-degassing kakhulu. Endabeni yokuphuza i-carbonated i-CO2 uzobe esheshayo enze ama-bubbles bese ekhuphukela phezulu.
kuya ku Amabhodlela angu-36,000 ngehora ngokusebenzisa kuphela I-1kW (isib. UIP1000)
sonication ngenkathi isitsha sishukumisa
Lokhu kuphumela ekukhuphukeni okusheshayo ekucindezelweni ngaphakathi kwe-can or closed bottle. Ukucindezela kuphakama kuholela ekuphunyeleni okusheshayo kwamanzi, uma isitsha singekho ubufakazi. Ngezinhlelo zokulawula izinga noma ukucindezela izikhumba ezivuzayo noma amabhodlela angasuswa ngemuva kwalokho. Okwe ukuvuza okuvuzayo iprosesa ye-ultrasonic ene-bar sonotrode eyingqayizivele ihlanganiswe emshinini wokugcwalisa, ngaleyo ndlela, ukuthi amathini noma amabhodlela ashukunyiswa eceleni kwe-sonotrode. Umshini wokucindezela ohlangene ne-sonotrode udala ukucindezela kwamathini noma amabhodlela ku-sonotrode, okudingekayo ukuxolisa kwe-ultrasonic.
Lo mshini wokucindezela ungaba nama-brush, amapulasitiki eplastiki, iziphethu zamagatsha njll isiphuzo sijabule ngokungaqondile ngodonga of the can noma ibhodlela. Ukugcwaliswa ngalunye umshini ungaba lula kabusha ngenxa yalokhu ukwakhiwa okulula kwezinhlelo ze-ultrasonic. Ngezinklamo ezifakwe ngokwezifiso ze-sonotrode uhlelo lwe-ultrasonic lungashintshwa kuzimo ezahlukene zesikhala. Njengoba lokhu akulona ukugezela kwe-ultrasonic, isitsha asikwazi ukumanzi. Ngakho ayikho inkinga yokuma. I-sonotrode ye-ultrasonic ingaba iqondile noma igobile ukuze ifane nomshini wakho. Sicela uchofoze ezithombeni ngezansi ukuze ubone imigomo ehlukahlukene.
Amathangi e-Ultrasonic avame ukusetshenziswa ukuhlola ubuqotho besitsha. Ngokusetha okunjalo, amabhodlela noma amathini ayagxiliselwa ethanini le-ultrasonic eligcwele amanzi. Izidakamizwa ze-ultrasonic ziyadluliselwa emdongeni wokuqukatha ngamanzi azungezile. Enye Inkinga enkulu kubangelwa ukuphuza utshwala nokuphuza. Isiphuzo sizoxuba emanzini bese sonakalisa izakhiwo zangaphandle zazo zonke iziqukathi ezimanzi. Ngaphandle komthelela ekubukeni okubonakalayo kweziqukathi, kukhona okungathí sina umthelela ekuphepha kwabathengi. Izinsalela zezinyosi kulesisitsha zizoholela ukukhula kwamagciwane kanye nomkhuhlane ngesikhathi sokugcina nokuhamba. Nakuba ukuhlanza kwamanzi okucacile kunciphisa le nkinga, ukungcola emgodini wezitsha ngokuvamile akuhlanjululwa. Ngakho inkinga iqhubeka.
Ukusetshenziswa kwebha i-sonotrode iqeda ukucwiliswa kweziqukathi ungene emathini. Ngakho-ke, kugwema ukungcola kwesitsha. Lokhu kuholela ekuthuthukiseni ukuphepha komkhiqizo.
Hielscher ikunikeza amadivaysi ultrasonic nge sonotrodes for the ukuhlanganiswa phakathi kwemishini yokuvivinya imithwalo yokuvuza elayini. Uzodinga izindlela ezengeziwe zokuthola ukuvuza, isib. Ukutholakala kwezinga noma ukutholakala kwe-liquid spray. I-Hielscher ayinikeli ukutholakala okuphelele kokuvuza izinhlelo. Uma ungumkhiqizi wemishini ungathola amayunithi we-OEM wokuhlanganiswa kwesistimu.
Izithombe ze-Ultrasonic Can and Bottle Checking
I-Ultrasonic Bottle Check
Ukuchithwa kwe-Ultrasonic ye-Liquids
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Intracellular Material
I-Microbial Inactivation nge-Ultrasound